Dib ugu laabashada Trump ee Aqalka Cad oo dood cusub
By Newsroom	 On Oct 6, 2020
Trump oo aan xirneen Face Mask ayaa dib ugu laabtay Aqalka Cad
Hogaamiyaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu laabtay Aqalka cad kadib maalmo kooban oo uu daryeel Caafimaad ku qaatay isbitaal militari oo loo dhigay kadib markii xaaladdiisa laga deeriyay.
Trump waxaa laga helay Xannuunka Covid-19, habeen kahor muuqaal kooban oo 4-daqiiqo socday ayuu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, diiradda waxa uu ku saaray caafimaadkiisa oo uu ku tilmamaay in uu wanaagsan yahay kadib 48-saac oo hadalkiisa la waayay.
Musharaxa loolanka adag kula jira ee Joe Biden ayaa dhaleeceen la dul dhacay Donald Trump, kadib markii uu isbitaalka ka baxay, markii uu galayay Aqalka dalka looga arrimiyo ayuu iska furay marada afka & sanka daboosha (Face Mask).
Biden ayaa Trump ku eedeeyay ku tumashada sharciga, gaar ahaan in uu halis geliyay ilaaladiisa, kadib markii isaga oo jirkiisa ku jira xannuunka Coronavirus uu iska furay marada afka ugu dabaalan (Face mask).
Trump & Biden oo ah labo musharax oo kala matalaya Xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga Mareykanka ayaa isku colaadinaya masraxyada, ficillada kala duwan iyo tallaabooyinka siyaasadeed, si qofba qofka kale uu u wiiqo awooddiisa dhinaca shacabka.
Dalka Mareykanka waxaa kusoo wajahan doorasho, Trump oo xilka madaxweynaha haya iyo Biden oo ku haminaya ayaa dood socotay 90-daqiiqo todobaadkii hore kusoo gaba-gabeeyay muran iyo is afgaarid.
Mali: “Soldiers have shown no confidence in civilians”
Manchester United Oo Shaqada Ka Caydhinaysa Ole Gunnar